Ibhedi yeWolf Den kunye neBreakfast Suite 2
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguRob And Gwendelyn
Ifakwe kumgama nje osuka edolophini iBanff, indlela yeBow River, kunye neFenland Loop. I-suite yabucala ifanelekile kwindawo yokubaleka ukuba uhamba njengesibini, nabahlobo okanye usapho. I-1100sq/Ft, suite inikezela ngomnyango wayo wabucala, ikuvumela ukuba uze kwaye uhambe ngexesha lakho lokuphumla. Ikhitshi iya kugcinwa phambi kokufika kwakho kunye nezithako ukuze ulungiselele isidlo sakusasa esinentliziyo qho kusasa.
Ufikelelo olulula ukuya nokusuka eTrans Canada Highway (Norquay Exit).
Iphangalele, iqaqambile, ithule, ibhedi etofotofo kunye nesidlo sakusasa entliziyweni yeBanff. Eli gumbi lihle le-1000 sq / Ft, igumbi lokulala eli-2 labucala kunye negumbi elibanzi libonisa ikhitshi (i-2 burner hot plate & Microwave oven), igumbi lokutyela, indawo yokuhlala eqhelekileyo, igumbi lokuhlambela elinesiqingatha, amagumbi amabini amakhulu eendwendwe kunye negumbi lokuhlambela eligcweleyo. Zonke zibekwe kumgangatho omnye.
Hlala kwindawo yakho yokuphumla kwindawo ezolileyo ekhuselekileyo kwaye/okanye wonwabele yonke idolophu ekufuneka ibonelelwe ngokuhamba ngemizuzu emi-5 ukuya kwiivenkile zaseBanff, iivenkile zokutyela kunye neegalari. Nokuba yeyiphi na indlela ikhaya lethu yindawo yokubaleka oya kuziva uphumle ukusukela oko ungena ngomnyango wangaphambili.
4.99 · Izimvo eziyi-108
Sikwindawo yokuhlala ezolileyo, kufutshane nazo zonke izinto eziluncedo kunye neendlela.
Umbuki zindwendwe ngu- Rob And Gwendelyn
Siyintsapho yabane abahlala kumgangatho ophezulu ngaphezu kwe-suite, ungaqhagamshelana nathi ngefowuni okanye ngetekisi: iinombolo ezinikezelweyo kunye nezalathiso zangaphambili zokuhlala kwakho. Ekufikeni kwakho kunye nakulo lonke ixesha lokuhlala kwakho siyafumaneka ukuphendula nayiphi na imibuzo onokuba nayo malunga ne-Banff kunye neendawo ezingqongileyo.
Siyintsapho yabane abahlala kumgangatho ophezulu ngaphezu kwe-suite, ungaqhagamshelana nathi ngefowuni okanye ngetekisi: iinombolo ezinikezelweyo kunye nezalathiso zangaphambili zo…
URob And Gwendelyn yi-Superhost
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Banff